Jordania: Manasazy filohan’ny klioba baolina kitra mpanakiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2019 3:30 GMT
Nipoitra ny tolakandron'ny 23 Desambra ny tatitra fa voampanga ho nanafika sy nanevateva manamboninahitra zandary iray i Tareq Sami Khoury ary voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina. Tsy tafiditra tamin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny 9 Novambra teo i Khoury, mpikambana ao amin'ny parlemanta teo aloha. Na izany aza, niverina an-tsehatra izy herinandro vitsivitsy monja taorian'izay amin'ny maha- filohan'ny fikambanana baolina kitra Wihdat azy. Nanakiana mpitandro ny filaminana i Khoury, nilaza fa nanao herisetra tamin'ireo mpankafy ny klioba Wihdat izy ireo.
Notsaraina i Khoury ary nosaziana tamin'ny fitsarana tsy natrehiny raha mbola tany Katar ny tenany, feno sioka mampifandray ny vaovao avy hatrany ny Twitter:
Ao amin'ny The Black Iris, ny valinteny voalohany nataon'i Naseem Tarawnah dia ny mampifandray ny fisamborana tamin'ny hetsika baolina kitra:
Mpisera Twitter A7lamShams nisalasala tamin'ny fanadihadihan'i Tarawnah: